राजनीतिक समिति सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
० संघीय समाजवादी फोरमले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिप्रति तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
— म के कुरामा सहमत छु भने अहिले दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । हाम्रो माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन हुने हो । माग संशोधनका लागि दुई तिहाई अनिवार्य हुनुपर्छ । यस अर्थमा जबसम्म नेकपालगायतका दल मिलेर दुई तिहाई मत पु¥याउँदैन तबसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारमा जानुको प्रमुख कारण नै संविधान संशोधनको लागि नै हो । हामीलाई पूरा विश्वास छ, यसपटक संविधान संशोधन हुनेछ ।
० संविधानमा मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरूलाई आवश्यक्ता अनुसार सम्बोधन गरिने भनिए पनि संविधानमा मधेश आन्दोलनका बारेमा नै उल्लेख छैन नि ?
— मधेश आन्दोलनलाई अब संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ जस्तो लाग्दैन । किनभने मधेश आन्दोलनले गर्दा नै देशमा संघीयता लागू भएको हो । यो भन्दा ठूलो उपलब्धी अरू केही हुन सक्दैन ।
त्यसैले संविधानमा मधेश आन्दोलन उल्लेख भएन भने पनि त्यो खासै ठूलो कुरा म मान्दिन । मधेश आन्दोलनमा आदिवासी, जनजाती र पिछडिएका वर्गसमेत सहभागी भएका थिए । हिमाल, पहाड र मधेश तीनै ठाउँमा आन्दोलन भएका कारणले त्यही शब्द नै समेटिएन भन्दैमा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन ।
० तपाईंहरूले गर्नुभएको दुई बँुदे सम्झौताको दोस्रो नम्बर कार्यान्वयन भइसक्दा अब पहिलो नम्बर जो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धीत छ, कहिलेसम्म गर्ने भनेर समयसीमा तोकिएको छैन, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
— तपाईंले भन्नु भएको ठिकै हो, सहमति पत्रमा संशोधनको समयसीमा तोकिएको छैन । हुन त यो सरकारले १०० दिनको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । तर हाम्रो लागि त सरकार नयाँ हो । हाम्रो लागि नयाँ भएकाले केही निश्चित समयसम्म हामी हेर्छौं । संविधान संशोधनको कुरामा आलटाल भयो भने यो कुरा हाम्रो दलबाट उठ्छ र पार्टीकै निर्णय अनुसार नै पार्टीमा बस्ने, समर्थन दिने, नदिने भन्ने कुरा आउँछ । अहिले यसमा विरोधित कुरा गर्नु भन्दा पनि संविधान संशोधनतिर हामी अगाडि बढौं र हुने संकेत अहिले हामी हेरिरहेका छौं । त्यसकारण यसमा म धेरै आशावादी वा निराशावादी हुन चाहन्न ।
० यो सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि कहिलेसम्म लगाउँछ ?
— यसका लागि दुई या तीन महिनासम्म हेर्नेछौं, त्यो भन्दा बढी हेर्न पनि हुदैन ।
० यो अवधिभित्र सरकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ?
० यदि यो समयभित्र पनि गरेन भने तपाईंहरूको रणनीति के हुनेछ, सरकार छोड्नु हुन्छ ?
— निश्चित रूपमा हाम्रो संघर्षको बाटो सडक हुन्छ र सदनबाट पनि हुन्छ ।
० संघीय फोरमले पहिले संविधान पुर्नलेखन हुनुपर्छ भन्दै थियो तर पछि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएको छ, यसबाट तपाईंहरूको अडानमा एकरूपता छैन । यसरी त जनतामा भ्रम फैलिन्छ होइन र ?
— समय र परिस्थितिअनुसार राजनीतिक कुराहरूमा परिवर्तन भइरहन्छ । एउटै अडान लिएर हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौं । तलमाथि अगाडि बढ्नैपर्छ । दुई कदम अगाडि बढ्यो भने एक कदम पछाडि पनि अवश्य नै फर्कनु पर्छ । अनि मात्र लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ । हाम्रो अडान त्यहींसम्म हुनेछ जुन कुरा पूरा हुनका लागि सम्भव छ ।
० संविधान संशोधन नभई मधेशमा चुनाव हुँदैन तपाईंकै पार्टी अध्यक्षले भन्नु भएको थियो । अहिले दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा जानुभयो, यसलाई जनतासामु यसको आधार पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?
— जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हाम्रो सामु प्रश्न चिन्ह खडा भइरहन्छ । तर राजनीतिमा राजनीतिज्ञले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ । किनभने संविधान संशोधन भन्ने कुरा कसैले बोल्दैमा हुने होइन । यो राजनीतिक विषय हो र बहुमतसँग सम्बन्धित छ । हामी तीन वटा दल मिलेर पनि यो संख्या पु¥याउन सक्दैनौं । जबसम्म नेकपा तयार हुँदैन ।
त्यसकारण एउटा बौद्धिक रूपमा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिले यो कुरा बुझिरहेको छ । बौद्धिक वर्गलाई भेटेर नै हामीले सहमति गरेका हौं । हामीले कसम नै खाएर आएका होइनौं अर्थात जनतासँग कुुनै पनि हालतमा सरकारमा जाँदैनौं भनेर कसम खाएर आएका होइनौं । हामीले राजनीतिक गरिरहेका छौं भने संसदमा हामी छौं भने सरकारको मानको कुरा पनि छ । त्यसकारण हामी सरकारमा जानुको आधार पनि छ ।
० तपार्इंहरू सरकारमा गएपछि संविधान संशोधन हुन्छ ?
— हामी संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा गएको हौं । यदि सरकारमा जानु मात्रै लक्ष्य थियो भने पहिले नै हामी सरकारमा जान सक्थ्यौं । जबसम्म नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गर्नका लागि तयार भएन तबसम्म हामी सरकारमा गएनौं । त्यस समयमा हाम्रो माग भएकै हो । तर ती दलहरूले हाम्रो मागलाई स्वीकार गरेर, लिखित सम्झौता गरेका कारण आज हामी सरकारमा गएका छौं ।
० यस्ता सम्झौता त विगतमा धेरै भइसकेका छन् तर यहि सम्झौताकै भरमा संशोधन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
— विगतदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने सम्झौताहरू धेरै भएका छन् तर कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण त्यो शंका हुनु स्वभाविक नै हो । तर यसमा हाम्रो गल्ती के छ ? त्यसकारण विगतमा भएका गल्ती अहिले नदोहोरिउन् भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । यो पटक सरकार र सत्तारूढ दलले संशोधनका लागि प्रतिवद्ध भएका छन् । सञ्चार माध्यममै आएर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ कि जनताको माग अनुसार र आवश्यक्ताअनुसार हामी संविधान संशोधन गर्छौ ।
० हत्या अभियोगमा कैदी जीवन बिताइरहेका नेकपाका वालकृष्ण ढुंगेल गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुक्त भए तर जनताबाट नै निर्वाचित रेशमलाल चौधरी मुक्त हुन सकेनन्, यस विषयमा दुई बुँदे सहमति मौन छ । के रेशम चौधरी तपाईंको पार्टीको नभएका कारण नबोल्नु भएको हो ?
— यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो । आन्दोलनको समयमा लाखौं मानिसहरू सडकमा आए, भौतिक संरचनाहरू नष्ट भयो । ममाथि पनि मुद्दा छ । यो सोच्नुपर्ने विषय छ । यो कुरा अदालतले पनि बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक मुद्दा हो कि कसैको व्यक्तिगत हो । यो अवस्था छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मैले भनेर या हाम्रो दलले भनेर बालकृष्ण ढुंगेललाई किन छोडियो या किन मुद्दा लगाइयो भन्दा पनि यो मुद्दा नयाँ पनि होइन धेरै पुरानो हो । माओवादीको भनाईअनुसार संसदीय व्यवस्थामा आयौं भने हामीमाथि लागेका मुद्दाहरू त खारेज हुनुपर्छ । एकातिर उहाँहरूको माग जायज हो भने अर्कातिर पीडित पक्षबाट हेर्दा उहाँहरूको जनधनको क्षति भएको छ, उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक निर्णय बिना गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एकतिर राम्रो हुन्छ भने अर्कोतिर नराम्रो हुन्छ । यसमा न्याय कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भन्न गाह्रो हुन्छ ।
० मधेश आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको प्रतिवेदन सरकारमा बुझाइसक्दा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मधेशी दलहरूको चासो देखिएको छैन, किन ?
— मधेश आन्दोलन मात्रै होइन देशमा भएका राणाकालीन घटना, दरबार हत्या काण्ड, माओवादी जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनका घटनाहरूलाई उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाए पनि कुनै पनि घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मलाई के लाग्छ भने यी सबै घटनाहरूलाई उजागर गर्ने हो भने यहाँ भएका ठूला नेताहरू नै फस्छन् । सायद त्यहि कारणले नै होला सार्वजनिक नगराइएको हो । मेरो व्यक्तिगत धारणाअनुसार भन्नु पर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यो अभियोग म माथि नै किन नपरोस् । यहि कमजोरीले गर्दा सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
० फोरम अहिले सरकारमा छ, फोरमले त्यसको लागि दबाब दिन्छ कि दिँदैन ?
— सरकार र सत्ता दुईटा कुरा हो । सरकारमा हामी छौं तर सत्तामा छैनौं । यो हामीले बुझ्नुपर्छ । अहिलेसम्म पिछडिएका वर्ग, जो संघर्ष गरिरहेका दलहरू छन् तिनीहरू अहिलेसम्म सत्तामा पुगेको छैन । यो सरकारमा हामी सहभागी मात्र हो सत्तामा होइन । जुन दिन हामी सत्तामा हुन्छौं त्यसदिन हाम्रो अध्यक्षले निर्णय गर्नुहुन्छ । त्यसकारण दुई वटा मन्त्री लिँदैमा सरकारका सबै निर्णय परिवर्तन गरिदिने कुरा सजिलो छैन र त्यो भन्नु पनि हुँदैन ।
० आन्दोलनको क्रममा सहयात्री रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई नसोधेरै तपाईंहरूले सम्झौता गर्नुभयो र सरकारमा पनि जानुभयो । राजपालाई किन बेवास्ता गरिएको हो ?
— राजपाका ६ वटा मित्रहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जब संविधान निर्माण गर्ने समयमा हाम्रो दुईतिहाई बहुमत थियो त्यतिबेला उहाँहरू सरकारको पछि–पछि लागेर सबै मुद्दालाई बर्बाद किन पारे ? त्यस समयमा आँखा खुलेन ? अहिले हामी संविधान संशोधन गर्ने भनेर नै सरकारमा गएका छौं । उहाँहरूको त्यो कुरा आफैमा मेल खाँदैन । यो अस्पष्ट भनाई हो । यो कुरामा राजपा सहमत छ भने हामी पनि चाहन्छौं कि एउटा दल सरकारमा बसेर र अर्को बाहिर बसोस् । उहाँहरूले धैर्य गर्नुस् । सडकमा बसेर संघर्ष गरौँ न । फोरम नेपाल पनि ७ वर्ष बाहिर बस्यो । उहाँहरूले सत्ताको वा सरकारको स्वाद चाख्नुभएको छ । त्यसकारण अहिले धैर्य धारण गरेर संविधान संशोधनतर्फ लाग्नुस् भन्न चाहन्छु ।